Galkacyo oo maanta ka isku khilaafay dhalashada bisha Soonfur, lana kala ciiday. – Radio Daljir
Galkacyo oo maanta ka isku khilaafay dhalashada bisha Soonfur, lana kala ciiday.
Galkacyo, Aug 30 ? Dadweynaha magaalada Galkacyo ayaa maanta isku khilaafay dhalashada bisha Soonfur iyadoo bulshada qaybo ka mid ah ay maanta ciideen halka kuwo kale oo badanna maanta ay u ahayd maalin ramadaan.
Is-khilaafkaa maanta ee ku aaddan ciidda ayaa yimid kaddib markii inta badan aragtida bisha laga waayey deegaannada Puntland inkastoo meelo badan oo Soomaaliya ah laga sheegay bilashada bisha Soonfur, madaxda kala duwan ee Puntland iyo federaalkuna ay iclaamiyeen maalinta in ay tahay maalin ciid ah.
Dadka maanta ka oogay Galkacyo munaasabadda ciidda ayaa ku tukaday masaajidda magaalada Galkacyo halkii horay ciidda dadweynuhu ay iskugu soo bixi-jireen garoonka ku badda cagta taasoo loo micnaysan karo tirada badan ee dadweynaha Galkacyo in ay berri ciidi doonaan.
Dadka maanta ciiday waxay soo soomeen 29 maalmood, halka kuwa aan ciidinna ay soo soomeen 28 maalmood, taasoo muujinaysa xilligii dhalashada bisha ramadaan in la kala soomay.
Inta badan deegaannada Puntland, kuwa kale e Soomaaliya iyo caalamka muslimka ayaa badankiisa maanta laga ciiday inkastoo ay jiraan deegaanno iyo dawlado muslim ah oo aan maanta ciidin.
Dadka maanta ciiday badankoodu waxay afureen kaddib markii xalay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa Puntland-ba ay si simin u shaaciyeen berri in ay tahay maalin ciid, waxaana deegaannada Soomaalida ka caadi ah in la isku-khilaafo Soonka iyo Ciidaha.